Umnqumo 2 - I-Airbnb
San Cipriano-Gubbio Pg, i-Italy
Le ndawo enhle enamapulazi amatshe angu-2 endabuko ibuyiselwe futhi yaphenduka yaba amafulethi angu-5 abukekayo. Le ndlu isendaweni enokuthula nokuthula enokubukeka okuhle ongakujabulela futhi uthamele indawo ezungezile.
Ifulethi ngalinye (IUPwagen-IUP166-IUP166-IUPwagen-IUPwagen) linendawo yalo yangasese nangaphandle, ngaphezu kwengadi enkulu nendawo yokubhukuda ehlanganyelwayo. Lena indawo ekahle yokuphumula nokukhululeka nokujabulela iholide elikahle.
Ngaphakathi endlini kunekamelo elilodwa, kodwa futhi nombhede owusofa egunjini lokuphumula ukuze ukwazi ukufanela izivakashi ezingu-4. Ifulethi lihlotshiswe kahle futhi linekhishi/igumbi lokuphumula elihle, lapho ungaphumula khona futhi ujabulele isimo sasekhaya.
Le ndlu isendaweni ekahle kakhulu yokuvakashela amadolobha amahle kakhulu ase-Umbria anjenge-Gubbio, i-Orvieto, i-Spoleto, i-Città di Castello, i-Spello, i-Todi ne-Perugia.
Ikhefu lokuphumula langempela lanoma yimuphi umhambi weholide ofuna ukuvakasha okunokuthula.
Le ndawo enhle enamapulazi amatshe angu-2 endabuko ibuyiselwe futhi yaphenduka yaba amafulethi angu-5 abukekayo. Le ndlu isendaweni enokuthula nokuthula enokubukeka okuhle ongakujabulela futhi uthamele indawo ezungezile. Ifulethi ngalinye (IUPwagen-IUP166-IUP166-IUPwagen-IUPwagen) linendawo yalo yangasese nangaphandle, ngaphezu kwengadi enkulu nendawo yokubhukuda ehlanganyelwayo. Lena indawo ekahle yokuphumula nokukhululeka nokujabulela iholide elikahle. Ngaphakathi endlini kunekamelo elilodwa, kodwa futhi nombhede owusofa egunjini lokuphumula ukuze ukwazi ukufanela izivakashi ezingu-4. Ifulethi lihlotshiswe kahle futhi linekhishi/igumbi lokuphumula elihle, lapho ungaphumula khona futhi ujabulele isimo sasekhaya. Le ndlu isendaweni ekahle kakhulu yokuvakashela amadolobha amahle kakhulu ase-Umbria anjenge-Gubbio, i-Orvieto, i-Spoleto, i-Città di Castello, i-Spello, i-Todi ne-Perugia. Ikhefu lokuphumula langempela lanoma yimuphi umhambi weholide ofuna ukuvakasha okunokuthula.
Amabanga: indawo yokuhlala eseduze 5 m / ukuyothenga 4 km / indawo yokudlela 4 km / idolobha eliseduze (Gubbio) 6 km